डिन जगदीश अग्रवालमाथि कालोमोसो | Samajik Khabar
Home घटना डिन जगदीश अग्रवालमाथि कालोमोसो
डिन जगदीश अग्रवालमाथि कालोमोसो
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन जगदीश अग्रवालमाथि कालोमोसो दलेको आरोपमा विजय थापा पक्राउ परेका छन् ।
थापा चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै अनसन बस्ने प्रा.डा. गोविन्द केसीविरुद्ध अनसन बसेका थिए ।
थापालाई मंगलबार साँझ महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जको टोलीले पक्राउ गरेको हो । थापामाथि गत भदौ २९ गते चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन अग्रवालमाथि कालोमोसो दलेको आरोप छ । थापाका सहयोगीले भने उनी पक्राउ परेको नभइ आत्मसमर्पण गरेको बताए ।
थापाले डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको सम्झौता खारेज हुनुपर्ने, डा. केसी अनसन बसेका बेलाको तलबभत्ता त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट लिए नलिएको छानविन गरी तलब लिएको भए राज्यकोषमा फिर्ता गरिनुपर्नेलगायतका मागसमेत गरेका थिए ।
Previous articleटर्कीका राष्ट्रपतिद्वारा उत्तरी सिरिया युद्धविरामका लागि अमेरिकाको आग्रह अस्वीकार
Next articleग्लोबल हंगर इण्डेक्समा नेपाल ७३ औँ स्थानमा